Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Apple Pay, fiantsenana tarehy, zoma mainty ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Ahoana no ahalalana fa ity herinandro ity dia nomarihin'i ny fankalazana ny Zoma Mainty. Tokony holazaintsika mazava fa na eo aza ny zava-misy fa ity fantatra amin'ny anarana hoe Black Friday dia avy any Etazonia, tany Espana ary any amin'ny firenena maro hafa dia niditra an-tsehatra tamin'ny fomba mahery vaika izy ireo ary tamin'ny fomba tena matanjaka. Ka ny zavatra voalohany asongadinay amin'ity alahady ity dia ny lahatsoratra mifandraika amin'ireo fihenam-bidy sasany ho an'ny Mac sy kojakoja samihafa.
Saingy ankoatry ny fihenam-bidy, tolotra ary vaovao hafa mifandraika amin'ny Black Friday, dia nanana vaovao miavaka hafa koa avy amin'ny Mac aho. Amin'ity herinandro ity Apple dia namela antsika tsy misy kinova beta ho an'ny fitaovanao rehetra ary tena hafahafa amin'ny Apple izany.
Araka ny efa nambarako tany am-piandohana, ny zoma mainty dia naka ny herinandro ary nanomboka tsara ity fizarana ity izahay miaraka amin'ity vaovao ity. Nividy zavatra ve ianao? Raha eny ny valiny, lazao aminay ireo hevitra.
Ny vaovao manaraka dia mifandraika amin'ny Apple Pay sy ny fandoavam-bola amin'ny orinasa kely. Tsy ho ela dia hanana isika Ity serivisy ity dia misy any Espana sy firenena maro hafa fa tsy maintsy ampifanarahana amin'izy ireo ny fivarotana ary io no nanombohana ny Orinasa kianja hamaha ity dingana ity.
Ity vaovao ity dia tsy hoe mahavariana, fa vao mainka tsy liana sy manaitra izy. Tompon'ny Apple Watch nalaina sary ratra eo an-tànanao dia zava-dehibe ary manome tsiny azy mahitsy amin'ny famantaranandro zazalahy cupertino. Apple manadihady ny raharaha ary manantena izahay fa hahafantatra ny vokany tsy ho ela.
Ny fisongadinana iray hafa dia ny fividianan'i Apple ny orinasa Tarehy. Betsaka aminareo no hieritreritra dieny izao fa mividy orinasa maro i Apple ary marina izany, saingy misy ifandraisany amin'ny teknolojia ahafahanao mamorona avatar sarimihetsika na tarehimarika hafa miorina amin'ny endrika tarehin'ireo tarehin-tsoratra amin'ny fotoana tena izy sy Toa antsika tsy misy isalasalana fa fividianana tena tsara.
Farany avelantsika ny peta-drindrina apetraka amin'ny toerana samihafa any Etazonia i Apple, milaza izany amin'ity indray mitoraka ity raha toa izany Tena matotra amin'ny Apple TV vaovao ry zareo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Apple Pay, fiantsenana tarehy, zoma mainty ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Ahoana ny fomba hisafidianana haingana sy fanovana lahatsoratra amin'ny 3D Touch
Amazon Prime Video dia ho vonona hiseho amin'ny Apple TV vaovao alohan'ny faran'ny taona